Somalia no adiresy voalohany tamin'ny Fihaonam-pirenena mamelona aina any ivelany RayHaber | raillynews
HomeIZAO TONTOLO IZAOAFRIKA252 SomaliaSomalia no adiresy voalohany tamin'ny fitaovana ara-pivelomana any ivelany
03 / 05 / 2020 252 Somalia, AFRIKA, IZAO TONTOLO IZAO, ANKAPOBENY, Coronavirus, Headline, MISY FOTOTRA
somary voalohany ny adiresin'ny respiratoram-pirenena tany ivelany
Teo ambany fandrindran'ny Minisiteran'ny Indostria sy Teknolojia, niaraka tamin'ny fiaraha-miasa avy amin'ny minisiteran'ny Fahasalamana, nanomboka nalefa tany amin'ireo firenena, izay novolavolain'i Baykar, Biosys, Arçelik ary Aselsan, ary nahazo marika feno avy amin'ireo mpitsabo taorian'ny fitsapana nahomby.
Somalia no adiresy voalohany tamin'ny apela fofonaina novolavolaina niaraka tamin'ny trano nasionaly tany ivelany. Torkia koronavirüsl karazana vaovao (Covidien-19) nandefa fanafody ho any Somalia izay ny maro an-toerana, anisan'izany ny fikarakarana mafy miaina fitaovana hiady. Tonga tao Somalia ireo fitaovana namboarina arahin'ny Filoha Recep Tayyip Erdoğan. Praiminisitra Recep Tayyip Erdogan, Torkia momba ny fanampiana naniraka tany amin'i Somalia, "miaina fitaovana efa mandroso ny National Teknolojia fandrosoana dia miaina ny Somali rahalahy sy anabavy." hita ao amin'ny famaritana. Ny fanehoana fa ny fotoan-tsarotra dia mampianatra ny firenentsika mba hatoky, Mustafa Varank, Minisitry ny Indostria sy Teknolojia, nilaza hoe: "Hitantsika ny fahombiazan'ny hetsika ara-teknolojia nasionaly izay noforoninay teo ambany fitarihan'ny filohantsika. Torkia dia miaina ny Somali rahalahy sy anabavy, "hoy izy.
NY ADDRAY MBOLA SOMALI ABROAD
Torkia, vaovao karazana Coronavirus (Covidien-19), no naniraka fanafody ho any Somalia, izay mifoka rivotra fitaovana hiady ny areti-mifindra eo amin'ny fikarakarana mafy vazimba teratany. Araka izany, ny firenena vahiny voalohany izay nisy ny respirator momba ny fikarakarana an-trano, izay nanomboka famokarana faobe tao anatin'ny 14 andro teo ambany fandrindran'ny Ministeran'ny Indostria sy Teknolojia dia nalefa, i Somalia, izay nahalalana fa tsy nisy ny mpanaja.
TAMIN'ny TRANSPORT AIRCRAFT
Noho ny tolo-kevitry ny filoha Recep Tayyip Erdoğan, nitaina tamin'ny fiaramanidina karazana A 400M tao amin'ny seranam-piaramanidina miaramila Etimesgut ny fitaovana namboarina ho an'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena, Fahasalamana, Indostria ary Teknolojia.
NIVORIANA NY FIAINAN'I MEVLANA
Amin'ilay fiaramanidina dia fitaovana fitsaboana azo antoka 5 misahana ny aretin-tsaina toa kitapo diagnostika, overalls ary saron-tava avy amin'ny respirator amin'ny fikarakarana marary ao an-toerana, izay novokarina tamin'ny sehatra voalohany, 10 arivo. Pennant filoham-pirenena amin'ny Torkia sy ny Tiorka sy ny lafiny Somalia Somali saina ary koa Mevlana, "Misy fanantenana any an-dafin'ny famoizam-po tsara. Betsaka ny masoandro ao ambadiky ny haizina. ” Namonjy ilay fiaramanidina rehefa avy naka teny ireo fanampiana.
"NY FIVORIANA TSY TOKONY, INDRINDRA VEHIVAVY"
Ny filoha Erdoğan, tao amin'ny lahatsorany ao amin'ny kaonty Twitter dia nilaza hoe: “Ny rivotra rivotra mamelona aina namboarintsika tamin'ny hetsika ara-teknolojia dia hamofona ny rahalahintsika any Somalia. Tsy sivily ny fiadivoana, resaka fieritreretana. Ny mety sy feon'ny fieritreretan'ny firenentsika dia miaraka amin'ny ampahorina sy sahirana. Aziz Millim, misy hazo fiaramanidina antsoina hoe fangorahana ao am-ponao. ” fomba fiteny ampiasaina.
“MITADIAVITRA NY FAHADIOVANA”
Ny minisitry ny indostria sy ny teknolojia Mustafa Varank dia nizara tamin'ny kaontiny Twitter, "Ny fotoana sarotra dia nampianatra ny firenentsika mba hatoky sy hanome aingam-panahy azy. Hitantsika ny zava-bitan'ny hetsika ara-tsosialy nasionaly izay natombokay teo ambany fitarihan'ny filohantsika. Torkia dia miaina ny Somali rahalahy sy anabavy. " hoy izy.
Ilay talen'ny fiarovana fiarovana teknika ao Baykar, Selcuk Bayraktar, avy ao amin'ny kaontiny media sosialy dia nilaza hoe: "Mandefa ny fitaovam-pofonaana entinay any an-trano izahay novokarin'ireo injeniera Tiorka nankany Somalia, firenena rahavavy tsy misy fitaovana. Tsy amin'ireto tany ireto ny hetsika ara-teknolojia nasionaly. "Ny fanantenan'ny mahantra izay ampahorina manerana an'izao tontolo izao."
INONA NO NITSANGANA NY FAMPISEHOANA?
Teo ambany fandrindran'ny Minisiteran'ny Indostria sy Teknolojia, teo ambany fiahian'ny filoha Erdogan, ireo injeniera Tiorka miasa eo ambany Biosys, Baykar, Arçelik ary Aselsan, izay niara-niasa tamin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana, dia nanao sorona tamin'ny alàlan'ny hetsika niaraka tamin'ny fahatsiarovan-tena ny fizotran'ny Firenena. Raha mbola ny ekipa dia nivory ny famokarana ny fitaovana "noho ny fanaovana vola" nijery, ny diffucult amin'ny ho dehibe avy any ivelany, na dia avo roa heny ny vidiny ho entinao ao an nitady unsent fananana an'i Torkia nanana vernacularization ao fohy ny 2-3 andro.
NY TANTARA FILOHA
Tao anatin'ny tafatafa iray tamin'ny volana lasa teo, nanazava ny fizotran'ny famokarana ilay fitaovana toy izao ny minisitra Varank:
"Ny otrik'aretina, talohan'ny nahatongavany Torkia Praiminisitra Recep Tayyip Erdogan ny toromarika, niezaka manao niaraka tamin'ny Ministeran'ny Fahasalamana. Novakiako isan'andro ny tatitra momba ny asa teknikan'ny injeniera. Ireo injeniera Tiorka dia niasa tao amin'ilay tetik'asa niaraka tamin'ny fahatsiarovan-tena ny fizotran'ny Firenena. Ny tsirairay amin'izy ireo dia niasa tamim-pitokisana tamin'ny fametrahana ny alina tontolo andro. Nahatsikaritra aho fa ny vokatra sarotra ampidirina avy any ivelany, na nanandrana hividy indroa indroa ny vidiny, dia tsy mifototra amin'ny fotoana fohy toy ny 2-3 andro. Ity dia zavatra azo sorona.
“AZONAO IZAO AZONAO HANOVANA”
Ny ministeranay dia manana orinasam-barotra iray izay misy tohana maro, antsoina hoe Biosys. Nanapa-kevitra izahay fa ity orinasa ity dia manamboatra fitaovana fanentanana tazomoka. Ny haavon'ny andrana rehetra vondrona 12 vokarina any Torkia, ary efa nanendry izay ho ampiasaina ao amin'ny hopitaly sasany. Nanao drafitra tamin'ny namantsika izahay ary nilaza hoe: 'Azontsika atao ny manamboatra ireo fitaovana ireo eto amin'ny firenentsika.' Ka dia niainga izahay.
“AZA MISORATRA NY FITAHIANA”
Eto, indrindra ny Selçuk Bayraktar avy ao Baykar dia nanohana be. Nandray ny asa izahay ary nanao asa injeniera ho an'ny famokarana faobe ny fitaovana. Nandritra izany fotoana izany dia nifandray tamin'i Arçelik, iray amin'ireo fikambanana indostrian'ny firenentsika efa voalamina tsara. Nanaiky ihany koa izy ireo fa hiditra amin'ity asa ity. Ho an'ny famokarana haingana sy faobe ity dia nasiana tsipika marika ary namboarina hametrahana fitaovana amin'ity zotra ity.
Nomeny ny famantarana izy
Namokatra ireo fitaovana ireo ho an'ny olombelona ihany koa izahay. Raha mahita ny mety ny filohantsika dia azo aondrana ihany koa ity fitaovana ity. Satria mino izahay fa mamokatra fitaovana manerantany.
Ny minisitra Varank dia nilaza ny fahombiazan'ny tantaran'ny mpihaino eo an-toerana
Ny motera jeneraly dia mifototra amin'ny lozika CEVA ho fitantanana ny Chain mpamatsy ny respirator
Epsilon-NDT manohy ny fitaterana an-dalamby any ivelany
Ny Lemak'i Bisflower Masoandro dia lasa adiresin'ny mpianatra
Fanamarihana Tender: Detector Door Metal, Generator ary Coil Isolated miaraka amin'ny X-Ray Fitaovana…
Fanamarihana Tender: Fandefasam-peo sy Fiber Optic Cable Fault sy Fividianana Fividianana Fitaovana…
Nursing Teraka tany an-tany hafa Torkia Nanjary Joba
Lasa adiresy vaovao ho an'ireo mpankafy avotra ny Denizli Cable Car
Ny adiresy vaovao momba ny zavakanto sy ny artista dia tao Ankara
Eo an-toerana sy ny taovam-pisefoana National Fitaovana an'i Torkia dia miaina Lehibe
IZBAN Torbali Torolalana misokatra tany an-tanindrazana no naharitra tany ivelany
Ny Railway Dizayn dia hanondrana entana manerantany
Ny adiresin'ny New Warehouse an'ny Galata Transportation ao Istanbul
Adiresin'ny Clusters ao an-trano